Kedu ihe kpatara Apple TV ọhụrụ ga-eji gbue Xbox ma ọ bụ Playstation | Esi m mac
Kedu ihe kpatara Apple TV ọhụrụ ga-eji gbue Xbox ma ọ bụ Playstation
Jesus Arjona Montalvo | | Apple TV, Noticias, Asịrị
A ọhụrụ akụkọ na-enye anyị a mma echiche nke ọhụrụ Apple TV nke na-atụ anya na-ulo oru ọnwa na-abịa, na a akụkọ ọ na-agụnye eziokwu na ọ ga-eresị a ngagharị-enwe mmetụta ọsọ ọsọ n'ime ime obodo yiri nke Egwuregwu Nintendo, kamakwa a mgbanwe mgbanwe na imewe ya.
Na akuko zuru oke site na TechCrunch, Matthew panzarino na-ekwu na Apple TV ọhụrụ ga-agabiga ịbụ ihe ntụrụndụ maka anyị, na-ewere nnukwu ọganiihu n'ihu mgbe ọ kwụsịrị Jenụwarị 2007. Nkwupụta ahụ gosipụtara na Apple TV ọhụrụ ga-egosipụta a A8 dual-isi processor iji bulie arụmọrụ. Na mmekọrịta na TV na Storelọ Ahịa App, nke a ga-ekwe ka Apple TV ọhụrụ na-agba ọsọ ngwa ọdịnala n'akụkụ-gen consolesdị ka PlayStation 3 o Xbox 360.
Panzarino na-ekwukwa na Apple TV ọhụrụ ga-enwe mgbanwe gbanwere nke ọma. Ọ ga-abụ nwantịị fatị na ntakịrị ihe arọ karịa ugbu a 3 ọgbọ Apple TV, ma ọ ga-abịa na a bọtịnụ raara nye Siri, bọtịnụ anụ ahụ na ọkara ala, na a touchpad ebe n'elu.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile, Panzarino anwa anwa kwuo ihe ndị a:
Otu ihe a na-ekwubeghị kemgbe bụ eziokwu bụ na ihe ọhụrụ ahụ ga-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, ikekwe gụnyere ihe mmetụta nke na-etinye gị njikwa dị ka Nintendo Wii dị iche iche.
Ọ ga-abụ ngwaọrụ egwuregwu enwere ike iji igwe okwu gwuo, ahụ bọtịnụ anụ ahụ, a touchpad y ngagharị njikwa njegharị. Ezie na Apple na-aga iduzi sara mbara gaminggba Cha Cha ahịa kwupụta ọhụrụ Apple TV. Chee echiche ka ọtụtụ na-eji ntinye voz, ebe ọtụtụ ndị na-ewu ewu osisi egwuregwu Genres ga-mma-eji na telivishọn karịa na iPad ma ọ bụ iPhone.
Ekwere m na ya Egwuregwu AppStore enweghị ikike nke egwuregwu PlayStation Nke ato Xbox 360, ma ọ bụrụ na ha abịa na njirimara ndị a na-ekwu, na na egwuregwu a kapịrị ọnụ maka Apple TV ọhụrụ a ọ ga-eju anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Kedu ihe kpatara Apple TV ọhụrụ ga-eji gbue Xbox ma ọ bụ Playstation
Lee anya, abụ m onye ndu ogologo ndụ, mana oke iwe nke isiokwu ahụ yiri ka ọ karịrị m ... ka anyị hapụ njikwa ndị ahụ n'otu akụkụ na igbe edozi n'elu nke ọzọ. Na ihe atụ nke arụmọrụ na ohere dị egwu ... ọ dịla mma ịbụ ndị fanboys n'ihi na akara apụl na-eme ihe
Iberibe dị ukwuu agaghị ekwe omume, dịka A8 nwere eserese eserese nke na-arụ ọrụ n'ihe dịka 5W na ndị raara onwe ha nye nwere ikike dị elu karị ga-asọ mpi, n'agbanyeghị agbanyeghị ọla ha kwuru na n'agbanyeghị agbanyeghị nzuzu ha na-agbakwunye, ọ ka bụ A8, ihe ARM, na dị ka ọtụtụ ga-enwe 2GB RAM na olile anya. Kedu otu ọ ga - esi asọmpi na consoles nwere 8GB RAM na nchekwa 500GB, na mgbakwunye na katalọgụ niile dị na njikwa.
Hahaha aha ya bu oke anumanu, o nweghi ike ituru mpi, n’agbanyeghi otu o siri sie ike, o ka bu Apple TV, ebe mgbasa ozi di elu. Ọ bụghị egwuregwu egwuregwu, echeghịkwa m na ọ ga-abụ, ọ bụrụ na asịrị ahụ bụ eziokwu, n'ọtụtụ ebe ikpo okwu iji kpọọ n'ụdị android tv.
Ma ọ bụ na o nwere katalọgụ nke egwuregwu ma ọ bụ Xbox ma ọ bụ playstation, egwuregwu nke ụdị ahụ chọrọ ike dị ukwuu, na apụl echeghị m na ọ chọrọ ịme vidiyo vidiyo, ọ bụrụ na ihe njikwa vidiyo dị oke ọnụ, site na apụl, ma ọ bụ M na-agwa gị ihe ọ ga-efu.
Emela ngosipụta aha hahaha, ọ bụ naanị ịkọwa asịrị kachasị ọhụrụ na igwe onyonyo.
Zaghachi Jesús Arjona Montalvo
Eziokwu bụ na isi okwu ahụ dị ntakịrị ... Enwere m obi abụọ na ị maara ọtụtụ ihe gbasara egwuregwu vidio, n'ihi na PlayStation 3 ma Xbox 360 abụghị consoles nke ọgbọ a. Play4 adịworị afọ abụọ na Xbox Otu ọzọ dị ka ọtụtụ. Ọ bụrụ na Apple chọrọ ịbanye n'ụwa nke egwuregwu vidio, enweghị m obi abụọ na Apple TV bụ Trojan ịnyịnya na ọ bụrụ na ihe arụ ọrụ, ha ga-anwa ịsọ mpi megide Sony ma ọ bụ Microsoft, mana ugbu a echeghị m. Ugbu a, ha ga-abụ egwuregwu nke ụdị mkpanaka ma ọ bụ nke mbadamba, ntakịrị mma na / ma ọ bụ na-emegharị. Ka o sina dị na Wednesde na-abịa, anyị ga-enwe obi abụọ, ugbu a ha niile na-ekwu okwu ...
Enwere m ps3, ọ bụrụ na onweghị ihe jikọrọ ya na ọgbọ ọhụụ, nchọpụta dị mma.
N'uche nke m, inwe ike igwu egwuregwu ipad na  tv, nke nwere ogo zuru oke, ọ dịka ezigbo ihe kpatara ịghara ịzụta njikwa ọzọ. Adịghị m onye egwuregwu, egwuregwu egwuregwu ụgbọ ala na-amasị m, egwuregwu egwuregwu Wii, obere ihe. Ọ bụrụ na m nwere ike ịme nke ahụ (Asphalt na TV ??: O) na-enweghị njikwa, n'ụlọ m egwuregwu ahụ, wii na Xbox na-anwụ.
Tonality dị na Mac App Store na ọkara price
Budata akwụkwọ ahụaja nke Apple Keynote na-esonụ